महिलाले पुरुषसँग बिस्तारामा के चाहन्छन् ! « Mero LifeStyle
युवा अवस्थामा सेक्स यौन चाहना अत्याधिक हुने गर्दछ । बिस्तारामा के गर्दा महिलालाई चरम सन्तुष्टि दिन सकिन्छ भन्ने कुराले पुरुषहरुलाई सताइरहन्छ । आफ्नो पार्टनरलाई सन्तुष्ट पार्न सके आफूलाई पनि मजा आउने पुरुषहरुले सोच्ने गर्दछन् ।
केले उत्तेजित गर्छ त ?
५. शावरमा सेक्स गर्नुस् । शावर खोलेर पानीमा भिज्दै सेक्स गर्नुको मजा स्वर्गीय छ । यसो गर्दा तपाईंले महिला पार्टनरका सबै हिचकिचाहटको अन्त्य गर्न सक्नुुहुन्छ ।
६. सँगै बसेर पोर्न हेर्नुस् । पुरुषले जेसुकै धारणा बनाएका हुन् तर महिलाहरू पोर्न हेर्नमा खुबै रुचि राख्छन् । सँगै बसेर पोर्न हेर्दा उत्तेजना चरममा पुग्छ ।
[…] हुँदा देखिन्छन् यस्ता लक्षणमहिलाले पुरुषसँग बिस्तारामा के चाहन्…यस कारण महिलाको यौनेच्छामा कमी आउँछ […]